Hey adda Human Rights Oo Eeden Kulul U Jedisay Alshabaab – Hornafrik Media Network
Warbixin ay soo saartay hay ada xaquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in Xarakada Al-shabaab ay sii joogteeyeen inay awood ku askareeyaan caruurta oo si xoog ah ehaladoodi uga wadanayaan bilihii lasoo dhaafay.
Dhamaadkii bishii September 2017kii Al-shabab ayaa ku amray odayaasha dhaqan iyo macalimiinta iskuulo diini ah oo ku yaala baadiyaha inay soo wareejiyaan boqolaal caruur oo da’doodi ayyan ka weyneen 8sano,bilihii lasoo dhaafay waxa ay bilaaben boqolal caruur ah in qoysaskoodi ay lasoo baxsadan iyagoo ka cararaya askareenta Al-shabab.
Letia Bader oo ah baare sare oo ka tirsan hay ada HRW ee Africa waxa ay shaaca ka qaaday in si naxeriis la aan ah ay u askareenayaan Al-shabab caruurta baadiyaha ku nool walidiintoodana waxaa lagu qasbay inay u adeegaan koxodaasi.
Baaritaanka meelaha ay Human Rigths ay ku samaysay waxaa kamid ah 15qoys oo ku nool 3 magaalo oo kala ah bardaale,baydhabo iyo buurhako.
Odayaasha tuuloyinka ayaa sheegay in bishii September lagu amray inay tagaan degaanka Buulo Folaay oo Al-shabab maamulaan ayna wareejayaan tobaneeyo caruur oo dadoodi u dhaxeysay 9 ilaa 15sano jir,mid kamid ah dadka degaanka bardaale ayaa shaaca ka qaaday inay u baahan yihiin wax ku taagera dagaalka waxa uu yiri waxa ay nagula hadleen si hanjabaado ah sidoo kale waxa ay naga doonayaan furayaasha ceelasheeni.
3 kamid ah dadkii la wareestay ayaa shaaca ka qaaday in odayaasha ay Al-shabab u geeyen 50caruur oo ay ku jirto gabar yar kuwaasi oo laga waday laba iskuul oo ku yaala Buurhakabo waxana la geeyay Buulo Folaay oo goob jogayaal ay sheegen inay tahay meel ay ku yaaliin dugsiyo diini ah iyo xarumo caruurta lagu tababaro.